Man United oo rikoodh cajiib ah ka sameysay Premier League kaddib guushii ay xalay ka gaartay kooxda Aston Villa – Gool FM
(Manchester) 10 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa sii wadata bandhigeeda fiican ay sameeneyso, kaddib markii ay guul ka soo heshay naadiga Aston Villa.
Manchester United ayaa guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Aston Villa 0-3 kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League ee dalka England, xilli goolashan ay kaga mahad celineyso xiddigaheeda kala ah Bruno Fernandes, Mason Greenwood iyo Paul Pogba.
Guushan ay xalay gaartay kooxda Manchester United ayaa ka dhigan inay tahay tii afaraad xiriir ah ee horyaalka Premier League, waxayna ilaa iyo haatan uruursadeen 58 dhibcood, iyagoo fadhiya kaalinta 5-aad ee miiska kala sareynta, waxayna hal dhibic oo kaliya ka hooseeyaan Leicester City oo booska afaraad ku jirta.
Sida laga soo xigtay shabakadda “Opta” ee looga haray tirakoobyada iyo rikoorada ka dhaca kubadda cagta, Manchester United ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay taariikhda horyaalka Premier League tan iyo markii magacan loo bixiyay, ee guul ku gaarta 4 kulan xiriir ah, 3 gool iyo wax ka badan.
Shabakada “Opta” ayaa tilmaamtay in kooxda Liverpool ay gaartay isla guulahaas, waxayna aheyd bishii October 1987, kahor inta aan horyaalka loogu magac darin Premier League.
Sidoo kale shabakada “Opta” ayaa sheegtay in Manchester United ay soo barbareysay rikoor cajiib ee ah kooxda heshay rigoorayaasha ugu badan hal xilli ciyaareed ee horyaalka Premier League ah, waana 13 rigoore.
Manchester United ayaa rikoorkan la wadaata kooxaha Leicester City iyo Crystal Palace oo sidaan oo kale sameeyay xilli ciyaareedyadii 2015/2016 iyo 2004/2005 sida ay u kala horeeyaan, halka kooxaha Liverpool, Arsenal, Chelsea iyo Blackburn ay kaalinta labaad kaga jiraan rikoorkan waxayna heystaan min 12 rigoore.